Zvigadzirwa zve6 zvine njodzi yakawanda yaunofanirwa kudzivirira mu2019 | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe uri weanochengetedza chimiro, zvichave zvirinani kuti mu2019 iwe utungamire mari yako kune yakachengeteka mari midziyo pane iyo inosanganisirwa mumisika yekutengesa. Kufungidzira kweavo vanoongorora zvemari akasiyana hakunyengeri zvakanyanya pane zvinotarisirwa nevashambadzi vadiki nepakati. Kana zvangove pachena kuti mabhegi apedza sei mukati megore remari rapfuura, ne kuderera kweanopfuura gumi muzana uye mune dzimwe nguva zvakatonyanya zvakanyanya. Icho chiratidzo chakashata kumisika yemari mazuva ano egore idzva.
Chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekutsanangura shanduko iyi mukutarisa mumisika yequity inokonzerwa nenjodzi chaidzo dze a hupfumi hutsva. Zvirinani misika yezvemari iri kudzikisira mukana wakadai. Hazvishamise kuti masheya anowanzo tarisira mamiriro emangwana, sezvakaitika munhoroondo uye kunyanya mumakumi emakore apfuura. Ivo vanoita nekukurumidza zvakanyanya mukuongororwa uye zvakare pamwe nekudzikisira kuti hakuwanzo kukanganisa.
Tichifunga nezvechiitiko ichi chinoitika kune zvikaenzana, hapana chaunogona kuita kunze kwekubvisa kubva muhomwe yako yekudyara nhevedzano yezvigadzirwa zvemari izvo zvinosanganisira yakawedzera njodzi. Iine mukana wechokwadi wekuti iwe unogona kurasikirwa nechakanaka chikamu chemasevha ako kubva ikozvino Hatisi kureva bhegi pacharo, asi pane akateedzana ezvigadzirwa zvinogona kuva zvine chepfu kuzvido zvako uye zvatichazokufumura pazasi.
1 Zvigadzirwa zvine njodzi: mvumo
2 Zvigadzirwa zvakabatana nemari
3 Zvibvumirano zvekusiyana
4 Iyo chaiyo mari chikamu
5 Inotorwa neimwe nzira
Zvigadzirwa zvine njodzi: mvumo
Mari yekudyara neakakwira manejimendi makomisheni, zvisungo zvinoshandurwa kuita masheya kana mogeji pasi pemari zvimwe zvezvinhu zvisingakurudzirwe zvigadzirwa zvemari zvegore idzva rekutengesa. Asi kana paine imwe inogona kukupa zvinopfuura kamwe kusada izvozvi, izvo hazvisi zvimwe kunze kweiyo mabvumirano. Icho chigadzirwa chakaomesesa chinozivikanwa nekusagadzikana kwazvo uye ndicho chinhu chepedyo chiripo panguva yekutenga sarudzo. Kwete pasina, inokupa iwe kodzero kumutengo wakatarwa wenguva yakatarwa iyo inoratidzwa mukupera kwayo.
Asi kana mvumo ichizivikanwa nechimwe chinhu, iri nehurefu hwakakwira, pamusoro pechinyakare. Kusvika padanho rekuti chinhu chakakosha ichi chingaite kuti iwe uwane mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete ichi, siya mairi mairi munzira. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu hwakachengeterwa iyo vanoita mari nedzidzo yepamusoro mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari. Saka iri njodzi yaunofanira kuzviisa pachena uye nekudaro haina kukurudzirwa kuti iwe uise mari yako inowanikwa gore rino muchigadzirwa chine hukasha sechibvumirano. Iwe une zvakawanda zvekurasa nekuvhura nzvimbo mune ino yekudyara modhi.
Zvigadzirwa zvakabatana nemari
Gore rino harizove rinonyanya kubatsira kuti iwe usarudze kuisa mari mumhando dzekudyara zvichibva kune imwe mari isiri iyo euro. Kunyanya muzvigadzirwa zvakanangana nemari yekudyara sezvo njodzi mukushanda ichawedzera zvakaenzana, asi pamusoro pezvose nenzira isiri madikanwa. Iwe haugone kukanganwa kuti chikamu chemari ndechimwe che zvakanyanya kushanduka mune dzino nguva uye zvinogona kukutungamira kune zvinokanganisa mamiriro. Kupfuura zvaunofunga kubva pakutanga.
Imwe yemisika inozoshandurwa zvakanyanya mugore idzva iri ndeye yemari uye izvi zvinokutendera kuti uwane mibairo yakanaka kwazvo, asi zvakare kuti iwe une kurasikirwa kwakanyanya kunetseka kutora. Kana usiri investor uyo anoshandiswa kushanda neiyi kirasi yemari midziyo, zvingave zviri nani kurega kuedza. Hazvishamise kuti imari yako iwe yauri kubhejera uye neiyi pfungwa, kuyedza mumisika yemari isingazivikanwe kwauri haina kukosha. Mhedzisiro yemabasa aya inogona kuva zvine chekuita nazvo kubva pane ese maonero. Kana uchikwanisa, icho chimwe chigadzirwa chemari chekudzivirira kubva zvino zvichienda mberi.
Nyanzvi dzinoomerera kuti zvakafanira kuwedzera dzidzo yemari munyika medu, kana iwe uchida kuteerera kurudziro iyi yehungwaru, hapana chinhu chiri nani pane kukanganwa nezveakakurumbira kusvika makore mashoma apfuura CFD. Iwo zvibvumirano zvemusiyano uye anotongwa neiyo imwecheteyo kana yakafanana zano reiyo yapfuura nzira dzekudyara. Uye zvakare, ivo vari pasi peziso rinotarisisa revatariri vezvemari nekuda kwenjodzi huru inobatanidzwa mukuita kwavo. Hauna kushanda nechigadzirwa ichi kana kuzviedza nekuti uchazvidemba.
Zvibvumirano zvekusiyana zvinobvumidza iwe kuti ubatsirwe nekuchinja kwemutengo kwezvigadzirwa zvepasi pasina kuve nazvo. Asi iwo akaomesesa kushanda uye mune ino mamiriro kunogara kukosheswa kwayo kwakanyanya sekunge kuti inofanira kupihwa basa neinvestment profile seyako. Pane zvakawanda zvemari mapuratifomu iyo inotengesa ichi chigadzirwa chekudyara uye nekudaro uchave nemimwe mizhinji miedzo yekuvhura zvinzvimbo mune chero ayo mafomati. Usakanganwa kuti inogona kuve nemhedzisiro inouraya pane zvaunofarira mugore rakaomarara rekudyara sezvo izvi zvichazove.
Iyo chaiyo mari chikamu
Kana paine chigadzirwa chaunogona kusiya zvachose zvese mu2019, zviri pasina mubvunzo izvi zvine hunyanzvi. Hazvishamisi kuti kune vatovezve vanoongorora zvemari vanoyambira kuti bubble yemari inogona kuputika mumwedzi iri kuuya. Naizvozvo, haufanire kuyedza rombo rako uye kutakurwa neiyo purofiti yakakura inogona kuwanikwa pane izvi zvigadzirwa mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva. Mune ino kesi, mapopoma haasi 10% kana 20% sezvazvinogona kuitika mumisika yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, tinotaura nezvazvo kuderera kwakakura kupfuura chiuru chimwe muzana.
Mukati meichi chiitiko, haugone kukanganwa kubva panguva dzino kuti iyo cryptocurrencies haisi yekudyara mune yechinyakare pfungwa yezwi. Asi akateedzana mashandiro ane akacherechedzwa ekufungidzira chinhu uye ane makuru anogona njodzi mukati meinogara iri yakaoma nyika mari. Izvo, kune rimwe divi, yakanyanyisa kuomarara mari yemhando iyo isina kuitirwa kune ese ma profiles nevashandisi uye neakanyanya maturusi anopihwa nedhijitari emari mapuratifomu.
Inotorwa neimwe nzira
Muboka iri hatigone kukanganwa zvigadzirwa zvakagadzirwa izvo zvatinofanirwa kuzvisiyira kune chiitiko chiri nani uye kana kusahadzika kunouya kwekudyara kwabviswa kubva panguva dzino chaidzo. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuziva kuti iri kirasi yezvigadzirwa zvemari zvinokutendera iwe kuti uise chikamu chidiki chemari yekutengesa, kuchengetedza kuburitswa pane zvese zve kondirakiti kukosha. Mune mamwe mazwi, ivo vanonyanya kuchinjika muchimiro chavo, kunyangwe mukutsinhana kwekutora dzimwe njodzi dzakawanda munzvimbo dzavo.
Kune rimwe divi, nezvakawanikwa hapana mubvunzo kuti iwe unozogona kubatsirwa kubva ku pinda yemusika, kuvhura pfupi nzvimbo. Uyu mutsauko usinga nzwisisike izvo zvigadzirwa izvi zvakafananidzwa neyakajairika mashandiro. Iko iko kutengeswa kupfupi kwakaomarara uye kune yakawanda mari yekuwedzera mari. Iyo ingangove imwe yemabhenefiti mashoma aunawo mune iyi yakasarudzika mhando yekudyara. Kunyangwe isiri iyo nguva yekuvhura zvinzvimbo, zvakati wandei muchiitiko chazvino chakapihwa nehupfumi hwakawanda.
Pamisika yese yezvemari, iyi inogona kunge iri iyo inokupa iwe kushamisika kukuru kukuru pane zvese. Mazhinji emidziyo yezvemari ari mumamiriro ekudzikira kwemitengo yawo uye mumwedzi iri kuuya maitiro aya anogona kunge achinyanya kuzivikanwa. Haisi zvakare yakanaka nguva yeku tanga mashandiro mune izvi zvigadzirwa kubva pakupera kwezuva iwe une zvakawanda zvekurasa kupfuura kuwana. Kunze kwemamwe marudzi ehunyanzvi kutariswa uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Kupindirana nenzira yekubatana uye en chigadzirwa chimwe chete ese makuru mabhenefiti anogoverwa, mvumo uye neramangwana zvinopa pamwechete. Ichi ndicho chimwe cheakakosha maitiro ezvigadzirwa zvinotorwa kubva mukugadzirwa kwezvinhu. Iko kunonyanya kuomarara kupfuura iyo yakatarwa njodzi sarudzo inokutendera iwe kuchengetedza yako capital kubva kune chero isingafungidzirwe kufamba mumisika yeiyi yakakosha yemari midziyo. Saka hazvishamise, saka, kuti vashoma uye varipakati varimari havasarudze iyi mhando yekumwe mashandiro uye kujekesa njodzi mumaodha avo ekutenga.
Sezvauri kuona, iwe uchitova neakateedzana ezvigadzirwa mausingafanire kuzvimisikidza kana iwe usiri kuda kuve nekusanzwisisika kusada kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya kana kushanduka kwayo mumisika kusingatarisirwe kana uchigadzirisa mafambiro nechinangwa chekuita yako inowanikwa capital ibatsire. Iwe zvirinani uvaendese kune imwe mari yemari inokupa iwe chivimbo chakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 zvigadzirwa zvine njodzi zvekudzivirira mu2019